उत्कृष्ट ५ इटालियन फिल्म, युट्युबमा अंग्रेजी सबटाइटलसहित :: Setopati
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, वैशाख १७
दोस्रो विश्वयुद्धमा हार बेहोरेपछि इटालीले युद्धको शोक, गरिबी र त्यसले सिर्जेको बेरोजगारीसँग जुध्नु परेको थियो। युद्धपछिको समयमा इटालीका धेरै सिर्जनशील सिनेकर्मीले यही अवस्थालाई फिल्मको विषय बनाए।
यही क्रममा जन्मिएका नवयथार्थवादी इटालियन फिल्मको प्रभावबारे आजसम्म बहस भइरहेको छ। नवयथार्थवादी धारका केही खास विशेषता थिए, जसकारण इटालियन फिल्मले संसारभरका दर्शक कमाउन सफल भयो। समीक्षकहरूको नजरमा पनि उत्तिकै योग्य ठहरियो।
विश्व सिनेमामा इटालीको अलग शैली र त्यसकै जगमा बनेको पृथक पहिचान छ। ओस्कार, कान र अन्य ठूला मानिने महोत्सवहरूमा इटालियन फिल्मकर्मीको दबदबाले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ। संसारभरका समानान्तर फिल्ममा धेरथोर इटालीको नवयथार्थवादी धारको प्रभाव पाइन्छ।
कथाले मात्रै फिल्म राम्रो बन्दैन। फिल्म कुन सन्दर्भमा कसरी बनाइएको छ भन्नेले पनि उत्तिकै अर्थ राख्छ। फिल्मलाई सार्थक रूपमा समाजको प्रतिविम्ब बनाउन त्यस चरणका निर्देशक कृत्रिम सेटबाहिर निस्केर आमजीवनको नजिक पुगे। गैरव्यवसायिक कलाकारलाई नै पर्दामा उतार्न थाले।
प्रकाश र ध्वनिमा पनि प्राकृतिक पक्षलाई नै जोड दिन थालियो। पर्दामा देखिने कुरा अब टाढाको कल्पना नभएर दैनिक जीवनकै हिस्सासरह नजिक महशुस हुन थाल्यो।
यो सूचीमा परेका केही फिल्ममा इटालीको नवयथार्थवादी धारा र त्यसकै जगमा फस्टाएको अन्य धारको प्रभाव पनि देख्न सकिन्छ।
इल पोस्तिनोः द पोस्टम्यान (१९९४), निर्देशकः माइकल रेडफोर्ड र मास्सिमो त्रोइसी
इटालीको एउटा विरानो गाउँमा शरण लिन आइपुगेका चिलीका विश्वचर्चित कवि पाब्लो नेरुदा र उनकी श्रीमती आएपछि स्थानीय मारियोको जीवन फेरिन्छ। नेरुदाका लागि हुलाकीको काम गर्ने मारियो नेरुदाबारे स्वभाविक जिज्ञासु हुन्छन्। नेरुदालाई आउने धेरै चिठीको खाममा महिलाको नाम देख्दा भने उनी अचम्म पर्छन्। उनको कवितामा केही त जादू छ, जसले महिलालाई आकर्षित गर्छ भन्ने सोच्न थाल्छन्।
नियमित भेटले मारियो र नेरुदा नजिकिन्छन्। प्रभावशाली कविको व्यक्तित्वको प्रभाव मारियोमा पर्छ। तर योभन्दा बढी उनी बेत्रिस नामकी महिलासँग एकोहोरो प्रेममा पर्छन्। ती महिलाबारे आफ्नो भावना साट्ने क्रममा उनी नेरुदासँग झनै नजिकिन्छन्।
संसारभरका पाठकमा प्रभाव पार्ने कवि नेरुदाको कविताले मारियोको संसार र जीवन हेर्ने दृष्टि फेर्दै ल्याउँछ। मारियो कविता सिकेर बेत्रिसलाई प्रभावित पार्ने प्रयासमा लाग्छन्। यसका लागि उनी नेरुदालाई बेत्रिसलाई सुहाउने विम्ब रचिदिन आग्रह गर्छन्।
के मारियोले मनपराएकी बत्रिसलाई प्रभावित पार्ने कविता लेख्न सक्लान् नेरुदाले? भेट्नुअघिका मारियो र पछिका मारियोमा के-कस्तो फरक आउँछ? हेर्नुस् 'द पोस्टम्यान'।
फिल्ममा यी दुई पात्रको सम्बन्ध चित्रण गर्दै उनीहरूको मित्रताको असाधारण कथा बुनिएको छ। फिल्ममा मारियोको भूमिका निर्वाह गर्ने मेसिमो ट्रोसी चर्चित इटालियन अभिनेता हुन्। यसमा उनको अभिनयले मन जित्छ भने फिलिप नोरेटसहज र मारिया ग्रेजिया आदि पनि आफ्नो भूमिकामा मजाले जमेका छन्।
ओस्कारमा सर्वश्रेष्ठ संगीतको पुरस्कार पाएको यो फिल्मको संगीत पनि विशेष छ।
सिनेमा पारादिजो (१९८८), निर्देशकः गुसेप्पे तोर्नातोर
सिनेमाको दुनियाँमा रूचि हुने जो कोहीलाई लोभ्याउन सक्ने फिल्म हो, 'सिनेमा पारादिजो'। फिल्मको केन्द्रमा पनि त्यस्तै दुई पात्र छन् जसलाई फिल्मले नै जोडेको छ। फ्ल्यास-ब्याकमा कथा भनिएको यो फिल्ममा साल्भातोर र अल्फ्रेदो दुई मुख्य पात्र छन्। यसमा सिनेमा हल पनि पात्रकै रूपमा फिल्मको केन्द्रमा आएको छ।
अल्फ्रेदोले प्रोजेक्टर चलाउने यो हलमा हरेक हप्ता एक जना पादरी आउँछन् र फिल्मका अश्लील लागेका दृश्यहरू सेन्सर गर्छन्। सेन्सर गर्नुपर्ने दृश्य आयो कि उनी घन्टी बजाउँछन्। लुकेर सिनेमा हेर्न पल्केका फुच्चे साल्भातोरलाई घन्टी बज्नुको कारण थाहा हुँदैन। तर हरेक पटक घन्टीको आवाज सुन्दा उनी मज्जा लिई-लिई हाँस्छन्।
हलमा आएर अल्फ्रेदोसँग बिग्रेका रिल माग्ने उनको दिमागमा फिल्मको गहिरो लत लाग्छ। यही क्रममा अल्फ्रेदो र साल्भातोरबीच गहिरो दोस्ती हुन्छ। फुच्चे साल्भातोरको फिल्म नशाले उनकी आमालाई भने चिन्तित बनाउँछ।
फिल्मको नशा, फिल्म हल चलाउन मिहेनत गर्ने एउटा पात्रको दुःखसुखजस्ता कुरा फिल्ममा मसिनोसँग आएका छन्। साथमा, हलभित्रको माहोल, दर्शकको प्रतिक्रिया र हल्लाखल्ला अनि केही महत्वपूर्ण फिल्मका दृश्य जोडेर यसमा फिल्म दुनियाँकै पाटालाई निर्देशकले आकर्षक रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
यो फिल्मको कथा निर्देशक तोर्नातोरको आफ्नै जीवन अनुभवसँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ। एक जना बालक र बुढामान्छेबीच फिल्मले जोडेको भावनात्मक सम्बन्धले दर्शकको मन छुन्छ। बालकलाकारले गर्ने संवाद, उनका गतिविधि र अभिनयले फिल्मलाई अझै सुन्दर बनाएको छ।
द गार्डेन अफ द फिन्जी कन्तिनिस (१९७०), निर्देशकः भित्तेरियो दि सिका
यो फिल्मले इटालीको दोस्रो विश्वयुद्धको सुरूआती समयलाई कथामा कैद गरेको छ। मुसोलिनीले इटालियन यहुदीहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रका धेरै ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाएपछिको प्रभाव फिल्मका पात्रहरुमा परेको छ। उनीहरू त्रासमा बाँचेका छन्। तर यो प्रभाव पात्रको वर्ग र पृष्ठभूमि अनुसार फरक छ।
जर्जों र मिकोल यस्तै फरक पात्र हुन्। जर्जोंको जीवनमा राज्यको यहुदीमाथिको नयाँ कानुनको असर पर्न थालिसकेको छ। तर मिकोलको घरमा यसको असर खासै परेको महशुस हुँदैन। यो घरका मान्छेको जीवनमा बाहिरको प्रभाव खासै देखिन्न। सामान्य यहुदीभन्दा फरक र सुविधाजनक अवस्थामा बाँचेका छन्।
ठूलो बगैंचा र बंगलामा बस्ने मिकोलको घरमा उनका साथीहरू नियमित ब्याडमिन्टन खेल्न आउँछन्। जर्जोंको दिनचर्यामा भने नयाँ परिस्थितिसँगै नयाँ समस्या थपिँदै आउँछ। बाल्यकालदेखिका यी दुई प्रेमीको सम्बन्ध, उनीहरूका साथी र परिवारको सम्बन्ध मार्फत निर्देशकले इटालियन यहुदी समुदायले भोगेका समस्या फिल्मको विषय बनाएका छन्।
फिल्ममा युद्धका प्रभावलाई केही पात्रमार्फत सशक्त रुपमा चित्रण गरिएको छ।
'बाइसाइकल थिभ्स' फिल्ममा गरिब पात्रको कथा भनेका निर्देशक दि सिकाले यसमा धनाढ्य यहुदी परिवारको सेरोफेरोलाई फिल्म बनाएका छन्। तर यसमा पनि दोस्रो विश्वयुद्धकै परिणामलाई फर्केर हेर्ने प्रयास गरेका छन्।
यो विदेशी भाषातर्फको उत्कृष्ट फिल्म बन्न सफल भएको थियो। यो जर्जों बासिनीद्वारा लिखित यही नामको उपन्यासमा आधारित फिल्म हो।
ला स्त्राडा (१९५४), निर्देशकः फेदेरिको फेलिनी
यो यात्रा गर्दै सर्कस देखाउँदै मान्छेलाई मनोरञ्जन दिई गुजारा चलाउने मान्छे मान्छेहरूको कथा हो। अरुलाई रमाइलो गराउने उनीहरूको आफ्नै जीवन भने सर्कसजत्तिको रमाइलो छैन।
शारीरिक रुपमा बलियो जाम्पानो सडकमा छाती फुलाएर फलामको सिक्री तोड्ने कला प्रदर्शन गर्छन्। उनले आफ्ना सहयोगीका रुपमा एक जना विधवाकी छोरी गेल्सोम्नियालाई किनेर ल्याउँछन्। स्वभावले कठोर जाम्पानोको सहयोगी भने व्यवहारिक र मानसिक दुवै हिसाबले निर्दोष छन्। तर यो काममा रूचि भएकी उनी जाम्पानोको गाली र पिटाइ सहेरै पनि ट्रम्पेट बजाउन सिक्छिन्।
आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न नपाई जाम्पानोको निर्देशनमा चल्नुपर्दा उनले धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ। तर उनीसँग यसको विकल्प छैन। जाम्पानोको सर्कसमा एक जना मूर्ख पात्रको प्रवेश हुन्छ। उनी गेल्सोम्नियाप्रति आकर्षित हुन्छन्। मूर्ख पात्रको प्रवेशसँगै कथामा नयाँ द्वन्द्व थपिन्छ। मूर्ख पात्र क्रुर होलान्, कि नम्र? त्यो द्वन्द्व कस्तो होला? थाहा पाउन फिल्म हेर्नुहोला।
फिल्मका मुख्य पात्रमार्फत यसले मान्छेको क्रुर र निर्दोष स्वभावलाई सशक्त रुपमा चित्रण गरेको छ। फेलिनी इटालीका सफल र प्रभावशाली निर्देशक हुन्। ओस्कारमा विदेशी भाषाको उत्कृष्ट फिल्मको पुस्कार जित्ने यो इटालीकै पहिलो फिल्म हो।
बाइसाइकल थिभ्स (१९४८), निर्देशकः भित्तेरियो दि सिका
संसारका राम्रा फिल्मको सूचीमा नछुटने नाम हो, 'बाइसाइकल थिभ्स'। संसारभरका यथार्थवादी फिल्ममा यसको प्रभाव कहीँ न कहीँ परेको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला।
भारतका पुरानो पुस्ताका सत्यजीत राय, विमल रायदेखि नयाँ पुस्ताका अनुराग कश्यपसम्मलाई प्रभावित पारेको यो फिल्मबारे नेपालमा निर्देशक अनुप बरालदेखि विद्वान राजनीतिज्ञ प्रदीप गिरीले समेतले प्रशंसा गरेको सुनिन्छ।
एन्तोनियो रिची, मारिया र ब्रुनो पात्रको वरिपरि घुमेको छ फिल्म। जागिरको खोजीमा भौंतारिरहेका एन्तोनियो रिचीले काम त पाउँछन्, तर यसका लागि उनीसँग साइकल हुनु अनिवार्य छ। साइकल नभए यो काम अरूले खोस्ने भएकोले उनी यो समस्या आफ्नी श्रीमतीलाई सुनाउँछन्।
मारिया रिसाउँदै भए पनि घरका केही तन्नाहरू बेचेर साइकल किन्ने पैसा जोहो गर्छिन्। फिल्मको पोस्टर टाँस्ने काम पाएको घरमा साइकल आएको दिन उनीहरूका छोरा पनि निकै खुसी हुन्छन्। तर काममा गएको पहिलो दिनै एन्तोनियोको साइकल चोरी हुन्छ।
यसपछि एन्तोनियो र उनका छोरा साइकल चोरको खोजीमा लागी पर्छन्। फिल्मको मुख्य अंश त्यही चोरको खोजीमा बिताएका घटनाले ओगट्छ। निर्देशकले दर्शकलाई यो साइकलको खोजी यात्रालाई मार्मिक तर रमाइलो ढंगमा देखाएका छन्। उनीहरूको यो यात्रामा इटालीको सहरी जीवनको झलक पनि सँगसँगै देखाइन्छ।
बुबा छोराबीचको संघर्ष, पीडा र प्रेमले जो कोहीलाई भावुक बनाउँछ। गैरव्यवसायिक कलाकार भए पनि उनीहरूको अभिनय जीवन्त छ। ब्रुनोको निर्दोष चरित्र झनै कायल बनाउने खालको छ।
निर्देशकले गरिब पात्रको कथा भन्ने क्रममा सहरका धनी वर्गका गतिविधिलाई दर्शकले आफैं दाँज्न पाउने अवसर सिर्जना गरिदिएका छन्। हराएको साइकल खोजीमा निस्केका यी पात्रले आफ्नो साइकल भेट्छन् कि भेट्दैनन्, थाहा पाउन हेर्नुहोस्, 'बाइसाइकल थिभ्स'।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १७, २०७७, ०१:४१:००